Tamarta - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kobcinta Dhaqaalaha|Energy
Xafiiska Tamarta Gobolka Washington
Dadka ku nool gobolkeena waxay ku bixiyaan $ 20 bilyan sanadkii tamarta. Lacagtani inteeda badan waxay gobolka uga tagtaa bixinta shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah. Ahmiyadeena tamarta dowlad-goboleedyadu waxay si aad ah uga faa'iideystaan ​​isku-dhafka aan caadiga ahayn ee gobolkeenna, hal-abuurnimada, iyo kormeerka cagaaran.
Xafiiska Tamarta Gobolka Washington wuxuu dib u eegis ku sameeyaa arrimaha tamarta, wuxuu ka shaqeeyaa faa'iidooyinka tamarta iyo yoolalka tamarta gobolka. Waxaan siineynaa taageerada siyaasada tamarta, falanqaynta iyo macluumaadka gobolka waxaanan siineynaa deeqo tamar hay'adaha gobolka Washington.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xafiiska Tamarta ee Gobolka Washington.
Deeqaha Tamarta iyo Barnaamijyada Amaahda
Sanduuqa Tamarta Nadiifka ah waxay siisaa deeqo mashaariicda tamarta nadiifka ah.
The Dib-u-habaynta Tamarta ee Dhismayaasha Dadweynaha Barnaamijka (horey waxtarka tamarta iyo deeqaha qoraxda) waxay caawisaa wakaaladaha maxalliga ah, tacliinta sare ee dadweynaha, dugsiyada degmada iyo hay'adaha gobolka.
Barnaamijka Kaalmada Dhaqaalaha ee Waxyaabaha Kaymaha waxay taageertaa warshadaha wax soo saarka dhirta iyo dhirta.
Barnaamijka Amaahda Dayactirka Guriga waxay ka caawisaa milkiilayaasha guryaha miyiga ah ee la halgamaya hagaajinta guryahooda.
MAP deeqaha tamarta.
Cimilada ayaa ka caawineysa yareynta kharashka tamarta qoysaska dakhligoodu hooseeyo iyadoo kordhinaysa waxtarka tamarta ee guryahooda. Cimilo-qoyntu waxay saameyn togan ku leedahay bulshada dhexdeeda waxayna intaa sii dheer ka caawisaa kobaca dhaqaalaha waxayna yareyneysaa saameynta deegaanka. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Cimilada
Waxtarka Gobolka iyo Waxqabadka Deegaanka (SEEP)
Waxtarka Gobolka iyo Waxqabadka Deegaanka (SEEP) wuxuu isku duba ridayaa dadaalada lagu yareynayo kharashaadka tamarta wakaaladda Gobolka iyadoo la hagaajinayo waxtarka tamarta iyo in la yareeyo wasakheynta waxyeelada leh ee ka dhasha qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo walxaha sunta ah. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan SEEP
Nadaafadda Tamarta Isbadalka Tamarta (CETA)
Sharciga Isbadalka Tamarta Nadiifka ah (CETA) (SB 5116) wuxuu sharci noqday May Meey 2019. Waxay u xilsaaraysaa Washington bixinta korantada oo ka madax banaan qiiqa gaaska aqalka marka la gaaro 2045. Tani waxay u oggolaan doontaa gobolka inuu beddelo shidaalka la adeegsado aakhirka iyo inuu gaaro himilooyinka cimilada muddada-dheer. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sharciga Isbadalka Tamarta Nadiifka ah.
Macluumaad Tamar badan
Istaraatijiyadda Tamarta ee Gobolka 2021
Nadiifi Sharciga Isbadalka Tamarta
Maareynta Degdega ah ee Tamarta
Dib-u-habaynta Tamarta ee Dhismayaasha Dadweynaha
Soo Bandhigida Shidaalka
Barnaamijka Dhimista Gaaska Greenhouse
Barnaamijka Isuduwaha Qashinka Warshadaha
Barnaamijyada Deeqda Tamarta
Korantada Barnaamijka Nidaamka Gaadiidka
Barnaamijka Kaalmada Dhaqaalaha ee Waxyaabaha Kaymaha
Deeqo la siinayo Deyn-bixiyeyaasha aan macaash doonka ahayn
Barnaamijka Amaahda Dayactirka Guriga
Barnaamijka Hal -abuurka Tamarta Nadiifka ah ee Reer Miyiga
Deeqaha Horumarinta Mashruuca Gobolka
Blog tamarta: Wararkii ugu dambeeyay ee Xafiiska Tamarta Gobolka ayaa laga heli karaa our blog.
Khariidadda koronto-dhalinta woqooyi-galbeed - NWCouncil.org